» मिस नेपाललाई भोट कम भयो, तुरुन्तै गरौँ भोट, मोबस्टार एपबाट यसरी गरौँ भोट ? (भिडियो)
मिस नेपाललाई भोट कम भयो, तुरुन्तै गरौँ भोट, मोबस्टार एपबाट यसरी गरौँ भोट ? (भिडियो)
८ मंसिर २०७५, शनिबार ०५:०५
हेटौँडा, ८ मंसिर । मकवानपुरको हेटौँडामा जन्मिएर मिस नेपाल हुँदै मिस वर्ल्डको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएकी मिस नेपाल श्रृङ्खला खतिवडा यतिखेर चीनमा आयोजना भइरहेको मिस वल्र्डको प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएकी छिन् । उनी भोटिङमा समेत नम्बर १ मा रहन सफल भएकी छिन् । तर हिजोका तुलनामा आज बिहानसम्म उनको भोट खस्किएको छ । भोटिङमा मल्टिमिडिया अवार्ड जितेमा उनी उत्कृष्ट ३० मा पुग्नेछिन् । त्यसपश्चात मात्र उनी मिस वर्ल्ड बन्ने सम्भावना बढ्नेछ । यतिखेर हाम्रो भोटले उनलाई पहिलो पटक मिस वर्ल्डका ५ विधामध्ये एक विधा मल्टिमिडिया अवार्ड जिताउन सफल हुन्छ । त्यसैले उनलाई भोट गरेर नेपालको नाम फैलाउन सहयोग गरौँ ।
भोट गर्ने तरिका जान्न यो भिडियो हेर्नुहोस्–
नोभेम्बर २८ सम्म मात्र भोटिङ लाईन खुला छ । उनलाई भोट गर्ने ४ तरिकाहरु छन् जसमध्ये यहाँ मोबस्टारबाट भोट गर्ने तरिका दिइएको छ । अन्य तरिकाका बारेमा हामीले अन्य भिडियोमा चर्चा गरेका छौँ ।
कसरी गर्ने त मोबस्टारबाट भोट ?
१) सबैभन्दा सुरुमा मोबस्टार एप मोबाईलमा डाउनलोड गर्नुहोस् ।
२) गुगल वा फेसबुक वा एकाउन्ट खोलेर तपाई त्यहाँ लग ईन गर्न सक्नुहुन्छ । मैले यहाँ फेसबुकमार्फत लग ईन गरेको छु ।
३) त्यसपछि अङ्ग्रेजीमा श्रृङ्खला क्जचष्लपजबबि टाईप गरेर खोज्नुहोस् ।
४) अब निलो टिक लगाइएको उनको प्रोफाईल खुल्छ । यो आइओएसमा भने पहेँलो टिक देखाउँछ । अब उनलाई फलो गरौँ र उनको प्रोफाईलबाट पोष्ट हुने सबै पोष्टमा बायाँबाट दायाँ स्वाईप गर्नुहोस् जसको अर्थ उनलाई भोट गर्नु हो । यसरी स्वाईप गर्दा अङ्ग्रेजीमा ‘थ्भकु आउँछ । उनको प्रोफाईललाई हरेक दिन हेर्नुहोस् र नयाँ पोष्टमा त्यसै गरी भोट गर्नुहोस् । हरेक पोष्टमा कमेन्ट गर्नुहोस् । कमेन्ट र स्वाईप नै भोटका रुपमा काउन्ट हुन्छ ।
तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? भिडियो राम्रो लागेमा लाईक, कमेन्ट र शेयर गर्न नभुल्नुहोला । मिस नेपाललाई मिस वर्ल्ड बनाउन पनि यो भिडियोलाई शेयर गरेर सहयोग गरिदिनुहोला । साथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गरिदिनुहोला ।
भोटिङ अपडेटका लागि यो भिडियो हेर्नुहोस्